Addiction Recovery Support Archives | Utah Pride Center
musha » Kupindwa muropa Kudzorera Rutsigiro
Directory Category: Kupindwa muropa Kudzorera Rutsigiro
Kupindwa muropa Kudzorera Rutsigiro
Sekureva kwemishumo, vangangoita 25% yevagari veLBBT vane dambudziko rekushandisa doro zvine mwero, pamwe nemamwe matambudziko ekushandisa zvinodhaka. Kana tichienzanisa, vangangoita gumi muzana yehuwandu hwevanhu vari kunetseka nekudhakwa. Izvi zvinotaura vhoriyamu nezve systemic zvinonetsa vanhu munharaunda yeGBBQT vanotarisana. Pamusoro pezvo, mamwe mapoka mudiki enharaunda yeGBBTQ anowana kunyange akanyanya mwero ekudhakwa. Neraki, sezvo ruzivo rwuchikura pamusoro pemhedzisiro yekunwa doro zvisina kufanira pavanhu veLBBTQ, zvimwe zvivakwa zvekuvandudza zviri kupa zviwanikwa kutsigira nharaunda yeGBBTQ.
Doro Rehab Nhungamiro
LGBTQ + uye Kupindwa muropa: Zvinokonzera, Zviwanikwa uye Kurapa
Zvinetso zvekushandisa zvinodhaka zvine hunyanzvi paLGBTQ + vanhu pane huwandu hwevanhukadzi. Nharaunda yeLBBTQ + inofanira kukunda zvipingamupinyi zvakati wandei, kusanganisira kurambidzwa kurapwa zvisina kufanira nekuda kwehunhu hwavo hwepabonde. Nekudaro, kuburikidza nekunzwisisa kwakakodzera uye pekugara kweLBBTQ + yekuchengetedza, kurapa zvinodhaka kunogona kubudirira.
LGBTQ uye Kupindwa muropa
Rondedzero yesarudzo dzekurapa kubva Addictioncenter.com
LGBTQ Vechidiki uye Kupindwa muropa
Kurapa Kudzikamisa & Kubvisa Management
New Vision inotarisirwa pakurapa, kunovharirwa muchipatara kwevakuru vanowana kurega kana kunwa doro, mishonga yekunyorera, uye / kana zvimwe zvinodhaka.
Chinangwa chedu ndechekubatsira avo vari munharaunda vari kuda uye vanoda kurega kushandisa doro kana zvinodhaka. Tine nzvimbo yakachengeteka, isina rusununguko muchipatara inogadzirira kubatsira avo vanotya kubvisa vega. Chikwata chedu chekurapa chakadzidziswa marapirwo uye mishonga yaunopa kudzikisira marwadzo uye kusagadzikana zvine chekuita nekubvisa detoxing. Isu tinogamuchira akawanda emabhizimusi uye epachivande inshuwarisi pamwe neMedicare uye mazhinji Utah Medicaid zvirongwa.
Vhura MF, 8:00 AM kusvika 5:00 PM